How'd it happen and more reports?: Management စိတ်ပါဝင်စားသောလူငယ်များနှင့် Executive Level တတ်လှမ်းမည့် ၀န်ထမ်းများအတွက် FoM (Foundation of Management) သင်တန်း
Management စိတ်ပါဝင်စားသောလူငယ်များနှင့် Executive Level တတ်လှမ်းမည့် ၀န်ထမ်းများအတွက် FoM (Foundation of Management) သင်တန်း
Myanmar Institute of Finance-MIF
- သင့်လုပ်ငန်းခွင်တွင် Management နှင့်ပက်သတ်သော အခက်အခဲ များကို သင်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခံစားနေရပါသလား?
- Management အတွေ့အကြုံ မရှိလျှင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခြေခံအဆင့်မှ စ၍ ၀င်ရောက်ကာ အချိန်ပေးပြီး အလုပ်လုပ်နေရပါသလား?
- Management ကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း Management နှင့် မရင်းနှီးသော လူငယ်များထဲတွင် သင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်နေပါသလား?
ကျွန်တော်တို့၏ FoM Program သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ ICPM (Institute of Certified Professional Managers) အဖွဲ့ကြီးမှ ပေးအပ်သော Program တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်တန်းတွင် Module (၃)ခု ပါဝင်ကာ HR ၊ Finance ၊ Leadership ၊ Communication ၊ Decision Making အစရှိသည့် Management Function များအားလုံးကို ရောပြွမ်းသင်ယူသွားရမှာ ဖြစ်ပါ သည်။ FoMပြီးဆုံးပါက ICPM မှပင် ချီးမြှင့်သော CM (Certified Manager) သင်တန်းကို Module တစ်ခုကင်းလွတ်ပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Module 1 : Management Foundation
Module2: Management Functions
Module3: Business Concepts for Managers
သင်တန်းကာလအားဖြင့် (၃)လ နာရီ-၉၀ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကြေး အနေဖြင့်တစ်လလျှင် တစ်သိန်း (Exam Fees မပါဝင်) နှင့် သုံးလအတွက် သုံးသိန်းကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းအား June လ (၂၀)ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် MIF ဖုန်း- 09976528783 (သို့) inquire.mif@gmail.com သို့ အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ASNGROUP MYANMAR at Thursday, May 14, 2015
Labels: စီးပွားရေး, ပညာရေး